रोचक Archives - Page 16 of 18 - Nayabulanda.com
घर किन्दा श्रीमती पनि पाइने ठाउँ
विभिन्न मालवस्तु बेच्नका लागि बिक्रेताहरुले अनेक खाले अफर ल्याउाछन् । एउटा सामान किन्दा अर्को सामान सित्तैमा दिने अफर सबैभन्दा चल्तीको अफर हो । यहीा अफरको चरम रुपका रुपमा घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा दिने अफर सार्वजनिक भएको छ । इण्डोनेसियामा घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा पाइने एउटा विज्ञापनले अहिले ठूलै तहल्का मच्चाएको ...
प्राय रातमा किन सेक्स गर्न रुचाउँछन् महिला ?
जब रात पर्छ तब महिला पनि सेक्सका लागि रोमान्टिक मुड बनाउने गर्छन। हालसम्म महिला लाजका कारण रातमा सेक्स गर्न रुचाउने गरेको कारण बताइदै आइएको थियो। तर, अनुसन्धानकर्ताले यसबारे अध्ययन गरेका छन। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार महिला आफ्नो बडी फिगरका कारण रातमा सेक्स गर्न रुचाउने गर्छन। बडी लुकका अनुसार उनीहरुले समय रोज्ने गरे...
सातामा कतिपटक सेक्स उत्तम ?
एजेन्सी तपाई कत्तिको सेक्स गर्न मन पराउनुहुन्छ ? सातामा एक, दुई या तीनपटक ? त्यसो त सेक्स जोडीको अवस्था, वातावरण तथा मुडमा पनि भर पर्छ। समय समयमा सार्वजनिक हुने सेक्सबारे गरिएका अध्ययनमा सेक्स पुनरावृत्तिबारे पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन। हालै सार्वजनिक गरिएको एउटा अनुसन्धान ‘ट्रेसी कोक्स’ ले भने सुखद सम्...
नेतृलाई बिहेकै दिन अन्डा प्रहार
एजेन्सी काठमाडौं : ब्राजिलमा वर्तमान राष्ट्रपति माइकल टेमरलाई समर्थन गरेको भन्दै एक नेतृलाई उनको विवाहकै दिन अन्डा हानिएको छ । पारानाको राज्य विधानसभाकी सदस्यसमेत रहेकी २५ वर्षकी मारिया भिक्टोरिया ब्यारोसलाई विपक्षी दलका समर्थकहरूले बिहेमै अन्डा हानेका हुन् । शुक्रबार साँझ क्युरिटिबाको चर्च अफ रोसरीमा उनको विवाह समारो...
भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा राजस्थानको अलवरमा एउटा पूरानो किल्ला छ । यो किल्ला अहिले भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । यो खण्डहरु कुनै समयमा भने एक भव्य तथा मानिहरुले भरिएको क्षेत्र थियो । यो इलाकामा सोमेश्वर, हनुमान, कृष्ण, देवी आदीका दर्जनौँ मन्दिर रहेका छन् । भगवानै भगवानको बीचमा रहेको यो ठाउँ चाहीँ भुता...
काठमाडौं : मंगलग्रहको उपग्रह ‘फोबोस’मा अन्तरिक्षयात्री बस्न सक्ने वासस्थानको नमूना तयार गर्न अन्डरग्य्राजुएट तहका इन्जिनियररिङबीच संसारभर गराइएको प्रतिष्पर्धामा नेपाली विद्यार्थीको समूह विजेता तीनमा छनोट भएको छ । अमेरिकन इन्ष्टिच्युट अफ एरोनटिक्स एन्ड एस्ट्रोनटिक्स (एआईएए)ले आयोजना गरेको प्रतिष्पर्धामा चार नेपाली विद्...
कन्डमबिना गर्भ नरहने गरि यौनसम्पर्क कसरी गर्ने ? जानी राखौ
हाम्रो समाजमा बिबाह गरे पछी श्रीमान श्रीमती दुवैलाइ जति सक्यो चाडों सन्तान जन्माउनु पर्ने दबाव हुन्छ । कुनै कुनै परिवारमा पहिले कोहि नामर्द वा बाझोपन छ छैन भन्ने कुरा हेरेर नवबिबाहितलाइ चाडों बच्चा जन्माएर आफ्नो प्रजनन क्षमता प्रमाणित गर्नु पर्ने बाध्याता समेत रहेको पाइन्छ । पहिले पहिले गर्भ निरोधक उपाय अहिले को जस्तै...
बिहे गरेको ३ दिनसम्म ट्वाइलेट जान पाइंदैन
यो दुनियामा संस्कार पनि कस्ता कस्ता ? हुँदा हुँदा बिहे गरेपछि ट्वाइलेट नै जान नपाइने । इण्डोनेसियाको टिडन्ग नामक आदिवासी समुदायमा यस्तो विचित्रको परम्परा कायम छ । उक्त समुदायमा बिहे गरेको तिन दिनसम्म बेहुला बेहुलीलाई शौचालय जाने अनुमति दिइँदैन । सुन्दा निकै अनौठो, अपि्रय तथा कष्टकर लाग्दछ । तिन दिनसम्म ट्वाइलेट जान न...
महिलाले सुत्नुअगाडि किन ब्रा फुकाल्ने ?
महिलाहरुको भित्री वस्त्र ‘ब्रा’ रातको समयमा सुत्नुअघि फुकाल्नु सहि कि गलत भन्नेबारे विवाद रहिआएको छ । कतिपय महिलाहरु रातको समयमा सुत्दा ‘ब्रा’ले निद्रा बिथोलेको बताउँछन् भने केहि महिलाहरु ‘ब्रा’ लगाएर सुत्दा स्तनको आकार राम्रो हुने र नझोल्लिने दाबी गर्छन् । हालै मेडिकल अनुसन्धानकर्ताहरुले लामो अध्ययन गरेपश्चात महिलाह...
दुनियाकै महंगो अण्डा ! मूल्य ३ करोड
आकारमा त यो सामान्य कुखुराको अण्डाजत्रै छ । तर यदि यसलाई देख्नुभयो र यसको मूल्य थाहा पाउनुभयो भने तपाइँको होसहवास उड्नेवाला छ । नउडोस् पनि किन ? यो कुनै मामुली फुल होइन । यसको मूल्य २ करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्दछ । १८ क्यारेटका ९ सय १० ह्वाइट गोल्ड हिराबाट जडित यो विशेष अण्डा हो । बेलायतको लण्डनस्थित एक गहना निर्माताले ड...